Hebrifo 10 NA-TWI - Nsonoe a ɛda foforo ne dedaw no mu - Bible Gateway
Hebrifo 9Hebrifo 11
Hebrifo 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 Mmara no yɛ nneɛma pa nsusuwso a ɛreba na mmom ɛnyɛ nneɛma pa no ankasa. Wɔbɔ afɔre koro no ara afe biara. Na ɛbɛyɛ dɛn na saa Mmara yi nam afɔre a wɔbɔ yi so ama nnipa a wɔba Onyankopɔn nkyɛn no ayɛ pɛ? 2 Sɛ nnipa a wɔresom Onyankopɔn no fi wɔn bɔne mu ayɛ pɛ a, ɛnne wɔrenni bɔne ho fɔ bio na ne saa nti, afɔrebɔ nyinaa to betwa. 3 Saa afɔrebɔ no kae wɔn wɔn bɔne afe biara. 4 Anantwi ne mmirekyi mogya rentumi mpopa bɔne.